SAWIRRO: Madaxweynaha Jubbaland oo Furay Shir looga hadlaayo dagaalka Al-Shabaab – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASAWIRRO: Madaxweynaha Jubbaland oo Furay Shir looga hadlaayo dagaalka Al-Shabaab
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta 19 Feb, 2018 waxaa uu furay Shir lagaga hadlayo dardar galinta howlaha dib u xoraynta deganada Jubbaland ee wali ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab.
Madaxweynahu wuxuu sheegay in shirkan oo socon doona mudo sadex maalmood ah lagu gorfayn doono inta uu la egyahay diyaar garowga dhinacyada kala duwan iyo sidii dib u habayn loogu samayn lahaa hananka howlgalkan oo la doonayo in Al-Shabaab lagu soo afjaro.
Shirkaan ayaa waxaa ka qeyb galaya Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed , AMISOM iyo sidoo kale xubno ka tirsan maamulka Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale tilmaamay in ciidamada maamulka Jubbaland ay u diyaargaroobeen sidii Al-Shabaab looga saari lahaa Al-Shabaab.
657,161 total views, 2,246 views today
657,161 total views, 2,246 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
657,033 total views, 2,244 views today
657,033 total views, 2,244 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
657,064 total views, 2,245 views today
657,064 total views, 2,245 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
657,126 total views, 2,246 views today
657,126 total views, 2,246 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
657,185 total views, 2,244 views today
657,185 total views, 2,244 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]